XOG: Mukhalasiin Kenya ka tahriibiya dadka ku biirayo Kooxda Daacish. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
XOG: Mukhalasiin Kenya ka tahriibiya dadka ku biirayo Kooxda Daacish.
Shabakad gacan-saar la leh Ma-gefayaasha Libya iyo Shaqsiyaad la shaqeeya ayaa la sheegay inay Kenya ka tahriibiyaan dadka doonaya inay ka mid nqodaan Maleeshiyadda Kooxda Daacish
Baarayaasha Hay’addaha Ammaanka Kenya ayaa shaaciyey inay jiraan xiriir u dhexeeya Dadka ka tahriiba Kenya iyo Kooxaha gacan-saarka la leh Daacish iyo Kooxda kale ee loogu yeero Ma-gefayaasha Libya ee madax-furashadda ka qaata Tahriibayaasha shisheeyaha ee ka gudba dhulka Lama-degaanka Libya.
Kooxda Daacish ayaa la rumeysan yahay inay Wakiilo u joogaan dalalka Kenya, Somalia, Nigeria, Algeria, Tanzania, Ethiopia, South Sudan iyo Masar, kuwaasi oo dadka u tashkiila iyo inay Ma-gefayaasha Libya dhaqaale ka abuuraan dadka ay ka qaataan Lacagaha Madax-furashadda.
Shabakadaasi ayaa la sheegay inay dadka ku biirayo Kooxda Daacish u fududeeyaan Safarka Tahriibka, waxayna Shabakadda Ma-gafe abuurteen 10-jid oo ay dadka kaga qaadaan Kenya, kuwaasi oo Diyaarad iyo dooni la saaro ilaa ay ugu sii gudbaan dalka Syria.
Khad kale oo Duullimaad ayaa jira oo dadka ku biiriya Daacishta ka dagaalanta dalka Syria ugu dhoofayaan magaalladda Lagos ee dalka Nigeria, kadibna Tahriib lagu sii marsiinayo dalalka Nayjar, Algeria, kadibna Libya.
Khad kale ayaa jira oo dadka ku biiriya Daacish la saaro Diyaarad ku sii jeeda Imaaraadka Carabta, kuwaasi oo haddana si tahriib ah kaga gudba xuduudka dalka Syria.
Warbixinta waxaa kaloo lagu sheegay in Dadka Kenyanka ee doonaysa inay ku biiraan Daacish-ta ka dagaalanta Libya gawaari lagu geeyo Caasimadda dalka Uganda ee Kampala, kadibna loo sii gudbiyo Caasimadda dalka Koonfurta Sudan ee Jubba.
Dadkaasi waxay inta ka dhiman safarkooda lug ku sii maraan Caasimadda dalka Sudan ee Khartoum, kadib Masar ilaa ay ugu dambeyn dooni ku galaan dalka Syria.
Baarayaasha Hay’addaha Ammaanka ee dalka Kenya waxay kaloo sheegeen inuu jiro Khad kale oo dadka Diyaarad looga qaadayo Nairobi ilaa caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Abeba, kadibna waxay Tahriib lugta ku maraan Sudan, Masar, waxayna kadib dooni ka raacaan Badda Mediterranean-ka, si ay u gaaraan dalka Syria.
Ugu dambeyntii, Baarayaasha Ammaanka ee Kenya waxay tilmaameen inay haatan wada-shaqeyn la yeelanayaan dhigooda dalalka kale, ei wax badan looga fahmo Shabakadda Ma-gefaha ee dadka ku tashkiiliya inay ku biiraan Maleeshiyadda Kooxda Daacish ee ka dagaalanta dalalka Libiya iyo Syria.
(DAAWO): Diyaaradii Rakaab ee ugu horreysay oo si toos isaga kala gooshtay Muqdisho iyo Nairobi.